[YEPAMUTEMO] dr.fone Toolkit - iOS WhatsApp Kutamisirwa, negadziriro yeparutivi & Dzosa
dr.fone Toolkit - iOS WhatsApp Kutamisirwa, negadziriro yeparutivi & Dzosa
Bata Your WhatsApp Chat, Nyore & Flexibly
Uchatamisa iOS WhatsApp kuna iPhone / iPad / iPod touch / Android namano.
Negadziriro yeparutivi kana ekisipoti iOS WhatsApp mashoko pamakombiyuta.
Dzosai iOS WhatsApp negadziriro yeparutivi kuna iPhone, iPad, iPod touch uye Android namano.
Uchatamisa History WhatsApp Effortlessly uye zvokusarudza
Hazvinei iwe kupfuura imwe mudziyo kana kungoda kushandura mudziyo wako wekare imwe itsva, unogona kushandisa chirongwa ichi kuti zvokusarudza uchatamisa wako WhatsApp chatting nhoroondo pakati iPhone wako uye iPad. Pashure Kuenda ane Android mudziyo, asiwo kunogona kubatsira kubvisa WhatsApp kukurukurirana kubva iPhone / iPad wako Android mudziyo itsva. chinhu chipi chaunoda, kusanganisira zvakabatanidzwa.
Uchatamisa WhatsApp Messages zvokusarudza
Unogona uchatamisa WhatsApp tutsamba iOS mano iOS kana Android mano zvokusarudza.
Negadziriro yeparutivi WhatsApp Messages Nyore
Unogona negadziriro yeparutivi WhatsApp mashoko enyu iPhone / iPad kuti kombiyuta chete watinya.
Preview WhatsApp negadziriro yeparutivi Content
Unogona kuverenga mashoko ose WhatsApp kwenyu negadziriro yeparutivi faira, sezvinoita mashoko uye zvakabatanidzwa. View zvamunoda.
Export Messages kubva WhatsApp negadziriro yeparutivi
Unogona zvokusarudza Export tutsamba WhatsApp negadziriro yeparutivi ive HTML faira. Zvakanaka kuti kudhinda kana vamwe.
Dzosai WhatsApp negadziriro yeparutivi
Kuti adzorere WhatsApp mashoko, unogona kuti zvose iOS uye Android mano vaigadzirise. Chinhu chimwe-watinya basa.
Izvi WhatsApp negadziriro yeparutivi nokudzosa chirongwa kuverengwa-chete zvachose software. harizovi kuchengeta, kuchinja kana achigarira maoko chero mashoko ari mudziyo wako kana ari ndipo pachinobatsirawo faira. Tinotora zvako pachako mashoko uye nhoroondo zvakakomba. nguva dzose uri munhu chete anogona kuwana nayo.
Negadziriro yeparutivi kana Export WhatsApp Kukurukurirana
Inoita negadziriro yeparutivi renyu WhatsApp nhoroondo nyore pane kare. Unobva kwako iPhone / iPad uye achiita chimwe watinya, kuti negadziriro yeparutivi inoshanda woga. Kunze, unogona kutoziva uye tarisa chero chinhu chaunoda uye Export kuti kombiyuta yako ive HTML faira yokuverenga kana kudhindwa.
Dzosai WhatsApp negadziriro yeparutivi kuna iOS / Android namano
Achitaura pamusoro WhatsApp negadziriro yeparutivi mafaira, unogona zvinomuomera kuikanganwa kubva kombiyuta yako kana usingadi kuichengeta, uye iwe unogona wenyu iPhone / iPad kana Android mano ovadzorera kana paine yakadaro inodiwa. Zvinogona kuitwa mukati mumwe watinya.
It chete anoverenga data, hapana mashoko pangozi.
100% Software yakachengeteka, hapana zvakaipa kombiyuta yako kana mudziyo.
Zviri kuwanikwa munhu, hapana Tech ruzivo akabvunza.
Unogona kuedza Software pachena kwemazuva 30.
Akatsigira iOS mano
Akatsigira WhatsApp Files
Chero faira zvakabatanidzwa
iOS 10, iOS 9 uye vaimbova
dr.fone Toolkit Ndibatsirei vakabudirira akatamisa WhatsApp mashoko kubva yangu Android Phone kare yangu itsva iPhone SE.
dr.fone Toolkit chinhu nyanzvi chikumbiro chakagadzirirwa kupora mafaira kubva Android mudziyo zvakananga muchapora dzadzimwa SMS uye neshamwari, kusanganisira mazita, nhamba uye E-mail kero, kuti Export navo HTML, uyewo mapikicha nemavhidhiyo vakarasika nokuda deletion.
Kugutsikana software iyi zvakanaka kwazvo rokudzorera WhatsApp mashoko.
Negadziriro yeparutivi WhatsApp Messages Online musi Android uye iPhone
Sei Dzosai WhatsApp Mashoko pamusoro iPhone uye Android namano
How kuwanazve dzadzimwa WhatsApp Images / Mifananidzo
Sei negadziriro yeparutivi kana Export WhatsApp Messages kubva iPhone
Sei dzosa WhatsApp Messages musi iPhone
WhatsApp negadziriro yeparutivi inofashaira: Verenga WhatsApp Kukurukura pamusoro Computer yako
6 Nzira negadziriro yeparutivi WhatsApp Messages
Flexibly negadziriro yeparutivi & kudzorera viber Chats musi iPhone wako, iPad, kana kombiyuta.